Maraykanka oo u aqoonsaday Qadar dal xulafo weyn la ah | Arrimaha Bulshada
Home News Maraykanka oo u aqoonsaday Qadar dal xulafo weyn la ah
Maraykanka oo u aqoonsaday Qadar dal xulafo weyn la ah
Bulsha:- Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in maamulkiisu uu doonayo in uu u aqoonsado dowladda Qatar meeqaamka dal “Xulafo weyn la ah oo ka baxsan NATO “, taasoo u ogolaaneysa in uu xiriir milateri iyo mid ganacsi oo ballaaran uu dhex maro labada dal.
Biden ayaa si cad u sheegay xilli uu Aqalka Cad wadahadalo kula yeeshay Amiirka Qatar Tamim bin Hamad in tallaabadan ay tahay mid muddo dheer la filayay.
Intii lagu guda jiray kulan uu Sheikh Tamim kula yeeshay Aqalka Cad Isniintii, Biden wuxuu Qatar ugu yeeray “saaxiib wanaagsan oo la isku halleyn karo”.
“Waxaan ogaysiinayaa Congress-ka in aan Qatar u magacaabi doono xulafo wayn oo aan NATO ka tirsanayn si ay u muujiso muhiimada xiriirkeena; Waxaan u maleynayaa inay muddo dheer dib u dhacday, ”Biden ayaa ka yiri Xafiiska Oval.
Maqaamku wuxuu Doha siin doonaa mudnaan dhaqaale iyo mudnaan ciidan oo gaar ah xiriirka ay la leedahay Washington.
Qatar waxay noqon doontaa waddankii labaad ee gobolka Khaliijka ka dib Kuwait oo noqda xulafada ugu weyn Mareykanka ee aan NATO ahayn.
Booqashada Sheekh Tamim ee Washington – oo ah tii ugu horreysay tan iyo markii Biden uu xafiiska qabtay Janaayo 2021 – ayaa ku soo beegantay iyada oo xiisad diblomaasiyadeed iyo mid milatari ay ka taagan tahay bariga Yurub, halkaas oo Mareykanku uu ka cabsi qabo in Ruushka uu qorsheynayo duulaan uu ku qaado Ukraine.
Toddobaadkii hore, Aqalka Cad ayaa sheegay in Biden uu Amiirka Qatar kala hadli doono hubinta xasilloonida saadka tamarta adduunka. Qatar waa mid ka mid ah kuwa ugu badan ee soo saara gaaska dabiiciga ah (LNG).
Yurub waxay si weyn ugu tiirsan tahay sahayda tamarta Ruushka oo laga yaabo inay ku soo rogaan cunaqabatayn, dhimis ama carqaladayn haddii Ruushka oo in ka badan 100,000 oo askari ku ururiyay xuduudka uu la leeyahay Ukraine uu go’aansado inuu ku duulo deriskiisa.
Isniintii, Biden wuxuu sheegay in iskaashiga Qatar uu dhexdhexaad u yahay dano badan oo muhiim ah oo Mareykan ah, oo ay ku jiraan kaalmada Doha ee daadgureynta muwaadiniinta Mareykanka iyo xulafada inta lagu gudajiro ka bixista qaska ee Washington ee Afgaanistaan ​​​​bishii Ogosto.
Madaxweynaha Mareykanka ayaa sidoo kale soo xigtay doorka Qatar ee ilaalinta xasiloonida Gaza iyo bixinta gargaarka nafaha lagu badbaadinayo Falastiiniyiinta.
Kadib Isniintii, Biden wuxuu si rasmi ah u ogeysiiyay Nancy Pelosi, afhayeenka Aqalka Wakiilada Mareykanka, ujeedadiisa ah in sare loo qaado maqaamka Qatar.
“Waxaan magacaabistan u sameynayaa anigoo aqoonsanaya sannado badan oo Qatar ay ku bixin jirtay dadaallada Mareykanka uu hoggaamiyo ee aagga mas’uuliyadda ee taliska dhexe ee Mareykanka iyo annagoo aqoonsaneyna danahayaga qaran ee ah xoojinta iskaashiga difaaca iyo amniga ee laba geesoodka ah ee aan la leenahay Dowladda Qatar,” ayuu ku yiri warqad uu u diray xildhibaanka Dimuqraadiga.
Dhankiisa, Sheikh Tamim ayaa sheegay ka hor kulanka uu la yeelanayo Biden inuu kala hadli doono madaxweynaha Mareykanka arrimo badan oo ay ka mid yihiin amniga gobolka iyo xuquuqda dadka Falastiiniyiinta oo siman”.
Labada dal waxay muujiyeen muddadii ay Afgaanistaan ​​ka baxayeen sida xooggan ee ay isaga kaashan karaan, ayuu yiri amiirka. “Waan sii wadi doonaa inaan ka wada shaqayno sidii aan u heli lahayn habab aan nabad ugu soo dabaalno gobolkayaga,” ayuu raaciyay.
Horaantii Isniintii, Xoghayaha Difaaca Mareykanka Lloyd Austin ayaa sidoo kale amaanay kaalmada Qatar ee daadgureynta Afgaanistaan.
“Ma aanan ka daadgureyn karin in ka badan 124,000 oo qof oo ka yimid Afgaanistaan ​​la’aanteed gargaarkaaga Camp As Sayliyah iyo Al Udeid,” Austin ayaa u sheegay Sheikh Tamim, sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay Pentagon-ka. “Waxaad ku soo dhaweysay gacmo furan kuwa ka tagay Afgaanistaan ​​si ay u helaan bilow cusub.”
Labada hogaamiye waxay isla soo qaadeen heshiis aad u ballaaran oo shirkadda Qatar Airways ay ku iibsanayso diyaarada Boeing 777X ku dhawaad ​​20 bilyan oo doolar.
Qiimaha saamiyada shirkadda Boeing ayaa sare u kacay 5 boqolkiiba ka dib markii lagu dhawaaqay heshiiska.
Biden ayaa bogaadiyay heshiiska, oo uu sheegay in uu ku kacayo $20bn. “Waa mid ka mid ah heshiisyadii ugu waaweynaa ee ay sameyso diyaaradaha Boeing, waxayna taageeri doontaa tobanaan kun oo shaqo wanaagsan oo Maraykan ah oo Maraykanka ah,” ayuu yiri madaxweynaha Mareykanka.
Dalka Qatar ayaa lagu tilmaamaa mid ka mid ah dalalka ugu galaangalka badan caalamka muddooyiinkii u dambeeyay.
Dalkan qaniga ku ah Gaaska dabiiciga ah ayaa waxaa uu gacan ka geystay heshiiskii uu Mareykanka uga baxay dalka Afqaanistaan.
Dalalka Qatar iyo Mareykanka ayaa muddo dheer ahaa saaxibbo aad isugu dhaw islamarkaana iska kaashada arrimo badan.